Video: Siyaasi Oromo ah oo soo bandhigay Shirqoollada ay Itoobiya umaleegayso Shacabka Soomaaliyeed
Monday June 17, 2019 - 19:21:42 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Telefeshinka rasmiga ah ee ku hadla afka xukuumadda dabadhilifka Masar ayaa ku dhawaaqay in uu geeriyooday Max'med Mursi oo mar soo noqday madaxweynaha dalka Masar balse markii dambe Inqilaab melleteriga talada looga tuuray.
Mursi ayaa noqday madaxweynaha rayidka Masar
Xeer ilaalinta nidaamka Alsiisi ayaa sheegtay in ay soo saari doonto warbixin rasmi ah oo ku saabsan sababta keentay geerida Mursi waxaana su'aalo laweydiinayaa dhaqaatiirtii qaabilsaneed arrimihiisa caafimaadka.
Max'med Mursi oo ka mid ahaa hoggaamiyaasha ugu caansan Ururka Ikhwaanka ayaa sanaddii 2012-dii noqday madaxweynaha dalka Masar kadib markii uu ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada isagoona ahaa madaxweynihii ugu horreeyay rayid ah oo ay yeelato dowladda Masar.
Mursi oo 68 sana jir ahaa ayaa muddo 6 sanadood xiriir ah wuxuu tacadiyo kula kulmayay xabsi ammaankiisa si aad ah loo adkeeyo sida ay sheegeen ehelladiisa iyo mas'uuliyiinta Ururka Ikhwaanul Muslimiin ee dibad joogga ah.
Hormuud oo lacag Boqolaal kun oo Dollar ah ugu deeqday Dadka ku saamoobay Fatahaadaha iyo Daadadka.